Rudzi: Kudzingisa uye Kubata
Ndiudze kuti ndeipi sutu yechando iri nani kutora norfin yakanyanyisa 2 kana 3 uye nei kunze kwemutengo? Kana zvichidikanwa, ndinopedzisa chipfeko changu kubva pane zvandiinazvo. Zvimwe zvinoshanda uye zviri nyore. Asi kana…
Ndeipi bara ichanyanya kushanda kurova bere chinhambwe chinosvika 60m. 30x06 kana 12 cal. Verenga apa: Zvombo uye makateti ebheya Blum M. Raibhurari Kuvhima pasina ... Kune avo vakatengesa ...
Ndekupi kwaunogona kupfura zvombo zvekuvhima muMoscow? Iwindo rinogona kuvhurwa. heino rumwe ruzivo rwuripo http://talks.guns.ru/forum/44/68025.html zvinoratidzira, mafoni, kupinda, mapassword. PaKutuzovskiy pakufambisa zvibodzwa nemagetsi ebhuruu. Parizvino ...
Ndezvipi zvirinani kutenderera, rakarukwa tambo kana tambo ?? Zvakaoma kutaura kuti ndechipi chiri nani, haufanire kuenzanisa x. ... ine tramu mubato, zvese zvinechinangwa chazvo. Kana uchiredza kuchena grey ne tyrolka zvakakosha ...
Dzidzisa iwe kupeta chikepe chePVC nenzira kwayo. Pombi mumutsetse wekudzoka wopomba mweya, uye zvikepe zvese zvinotanga kukotama bhodhi repamberi kutanga. Ehe, zviri nyore, aya ndiwo marongero atinoita mumasekonzi makumi maviri neshanu. ...
Zvinorambidzwa hove nekapa? Kunyangwe iyo yekuita idiki muhukuru, inobata. Uchishandisa mutsvaki wehove nechikepe, unosiya hove dzisina mukana wekuponeswa. Uyu haazi musikana mudiki! On…
Chii chinonzi clutch uye maitiro ekuigadzira ??? Iyo yekukweshera batira ndiko kuputsa kwedhiramu (spool) yeiyo inoyerera reel. Inogadzirisa kuenzanisa simba tambo uye tsvimbo. Pano, pano mune zvakadzama: http://www.youtube.com/watch?v=9VhDaiY5jS4 / Tarisa pamusoro Iye ...
Ndeapi makonye matsvuku ari muhove? Ini ndichawedzera kumhinduro RYBOLOV =)) kana makonye ari mumhasuru, saka iyi phylometrosis, iyo philemetria worm. Hazvina njodzi kuvanhu, asi zvinokanganisa kuratidzwa kwehove uye ...
Mvumo yezvombo yakapfurwa. kune yunifomu zviyero zvemunhu wese .. Tsvaga kukamba yemapurisa - kune vanhu vanonyanya kupihwa izvi .. Ehe, maitiro acho akafanana nekuwana rezinesi rekutsetseka ...
kurenda dziva nekusimudza hove ... mutambo wacho wakakodzera kenduru here?
kurenda dziva nekusimudza hove ... mutambo wacho wakakodzera kenduru here? Ehe saizvozvo. Iwe unongofanirwa kugara padyo nedziva uye nekuisa yakawanda basa uye nguva kuitira kuti paite hove uye purofiti !! ...
Nzira yekugadzira zvakagadzirwa sei zvekuvhima skis? Ingoenda kuchitoro uye utenge. Izvo hazvina kudhura zvakanyanya.Kana iwe usingazive kuzviita uye usati wambozviona zvachose, hapana munhu ane ruzivo padhuze ...
Inguva yakareba sei carp inobereka? Verenga zvimwe zvakangwara zvinyorwa. Kunyanya avo ichthyologists vanonyorazve imwe data, uye vakaona crucian carp chete muhucheche (uye kunyangwe ipapo kwete ese) ...
Blowback system. Kunze kwekuteedzera iyo shutter rollback, iyo blowback system inobvumidza iyo mashandiro kushanda kana ichipfura in otomatiki mode paPPA-K muchina pfuti (iyo yakafanana neCedar), iyo gasi yekushandisa ishoma. Paunodzingwa, chikamu ...
Chii chinonzi mharadzano, rwizi, rwizi, mabhureki kuchikoro akataurira chimwe chinhu nezvazvo, ndatozvikanganwa .. Zvichienderana nemwaka nemamiriro ekunze, piki piketi inogona kuchengeta mune chero nzvimbo dzakanyorwa
magwaro kana mvumo yechikepe cherabha chine mota Kana chikepe pachacho chichirema zvisingasviki 200 kg uye mota iri pasi pegumi mabhiza, hapana chikonzero chekunyoresa, kodzero yekutyaira neinjini yemukati yemoto inopfuura mashanu mabhiza ...
Mubvunzo wevanhu vane ruzivo, pneumatic pistol inogona kuuraya munhu here? Pneumatic inogona kuuraya munhu! Kukunda kupi kupfura .... kana pahuma, ndokuurawa) CHIPONI. Che? Chii chinonzi pneumatic? Jamb inogona kuuraya ...
ndeipi iri nani Hatsan 125 kana Gamo Hunter 1250? pfuti Chokwadi hatsan 125 kana simba nemutengo wakanaka zvakakosha kwauri, asi gamo muvhimi 1250 akagadzirwa nematanda uye izvi ...
Ndeupi mubato wakanakisa webanga? Ndezvipi zviri nyore, zvinokurumidza kana zvakachipa kugadzira banga rekubata? Ini ndakagadzira yemhembwe mhembwe, mhembwe mhembwe dzinomhara ... Unobika chimedu chakakodzera chehwamanda kwemaminetsi ...
Mubvunzo kune vanotora howa: Iyo chanterelle inotaridzika sei uye ine mapatya ane chepfu? Kazhinji chanterelle Scientific classification Kingdom: Mushroom Chikamu: Basidiomycetes Kirasi: Basidiomycetes Subclass: Agaricomycetidae Order: Chanterelle mhuri: Chanterelle marudzi Genus: Chanterelle marudzi: Kazhinji chanterelle Latin zitaCantharellus cibarius Fr.
Ndokumbira undiudze macode emutambo Russian Fishing 3.0 Mutambo Russian Fishing - mutambo kuongorora, kufamba, chigamba, makodhi, kubiridzira, pc ... Ruzivo pamutambo Russian Fishing pc, makodhi, kuongorora, kuongorora, mutambo wenhau, ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,609 masekondi.